लेनोभो A5 र लेनोवो K5 नोट: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज | Androidsis
लेनोभो A5 र लेनोवो K5 नोट: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
लेनोभो Z5, जसले सामान्यतया निराश भएको छ, फर्मले हिजो मात्र शुरू गरेको फोन मात्र थिएन। उनले हामीलाई यस कार्यक्रममा उनको मध्य-दायराका लागि दुई नयाँ मोडेलहरू पनि छोडे।। यो लेनोभो A5 र लेनोवो K5 नोट हो। हामीलाई विनिर्देशको हिसाबले दुई साधारण मोडलहरूको सामना गर्नुपर्‍यो, एकदम विनम्र, तर जो किफायती भएको खण्डमा देखिन्छ।
तेसैले यी लेनोवो A5 र लेनोवो K5 नोट बजार मा एक आला पाउन सक्छ। यस तरिकाले, तिनीहरूले मार्केटमा ब्रान्डलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ, जहाँ तिनीहरू वर्षौंदेखि मैदानहरू हराइरहेका छन्। हामी यी दुई मोडेलबाट के आशा गर्न सक्छौं?
दुबै मोडेलहरू पहुँचयोग्य स्पेसिफिकेशन्सको लागि बाहिर उभिन्छन्, यद्यपि ती दुई बिचको महत्त्वपूर्ण भिन्नताका साथ, पातलो फ्रेमहरूको साथ डिजाइन तर खाच बिना, र राम्रो मूल्यहरू। हामी तपाईलाई प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा अझ बढी कुरा भन्छौं।
1 निर्दिष्टीकरण लेनोवो A5
2 निर्दिष्टीकरण लेनोवो K5 नोट
निर्दिष्टीकरण लेनोवो A5
हामीले यो फोनबाट सुरू गर्यौं, जुन चिनियाँ निर्माताको मध्य-दायरा वा तल्लो-मध्यम दायरामा पुग्छ। यो यस्तो छैन कि यसमा खराब विशेषताहरू छन्, तर यो फोन होइन जुन बजारको यस क्षेत्रलाई जित्ने भनिन्छ। यद्यपि यो धेरै कार्यशील हुनका लागि बाहिर देखिन्छ र यो राम्रो बजारमा आश्वासन दिन्छ जब यो बजारमा सुरू गरिन्छ। यी लेनोभो A5 को पूर्ण विशिष्टताहरू हुन्:
स्क्रिन: HD + रिजोलुसन (१ resolution5,45० × p२० पिक्सेल) र १:: ratio अनुपातको साथ .1440..720 इन्च
प्रोसेसर: मिडियाटेक MT6739
GPU: PowerVR रोग GE8100
आन्तरिक भण्डारण: १ / / 16२ जीबी २ micro32 जीबी सम्मको माइक्रो एसडी कार्डको साथ विस्तारयोग्य
रियर क्यामेरा: अपर्चर एफ / २.२ संग १ MP सांसद
अगाडिको क्यामरा: MP MP एपर्चरf/ २.२
अपरेटिङ सिस्टम: अनुकूलन तहको रूपमा Zen UI 8.1 लाइटको साथ एन्ड्रोइड .3.9.१ ओरियो
ब्याट्री: 4.000 XNUMX०० एमएएच
आयाम: 158.3 × 76.7 × 8.5 मिमी
वजन: 176 ग्राम
अन्य: रियर फिंगरप्रिन्ट रिडर
त्यहाँ केहि पक्षहरू छन् जुन विशेष रूपमा फोनमा देखिन्छ, यसको ,4.000००० एमएएच ब्याट्री मनपर्दछ। यो एक ठूलो आकार हो, जसले धेरै स्वायत्तता दिने वाचा गर्दछ। किनकी यो विनिर्देशन छैन कि भावना दिन्छ कि तिनीहरूले धेरै खपत जाँदैछन्। केहि चीज जसले फोनमा लामो समयसम्म चल्ने ब्याट्री खोजिरहेका प्रयोगकर्ताहरूको लागि आदर्श बनाउँदछ।
यो लेनोभो A5 पछाडि फिंगरप्रिन्ट सेन्सरमा पनि दांउछ, जसले प्रयोगकर्तालाई फोन सुरक्षित रूपमा अनलक गर्न अनुमति दिनेछ। यो पनि पूर्वनिर्धारित द्वारा अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा भर्खरको संस्करणको साथ आउँछ, केहि पक्कै पनि सकारात्मक रूप मा मूल्यवान हुनु पर्छ।
निर्दिष्टीकरण लेनोवो K5 नोट
दोस्रो स्थान मा हामी दुई को अधिक पूर्ण मोडेल छ जुन चिनियाँ ब्रान्डले मध्य दायराको यस खण्डमा प्रस्तुत गरेको छ। तथ्य यो हो कि यो नोट नोटको साथ आउँदछ पहिले नै धेरै नै अर्थ राख्छ। कि यो केहि बढी पूर्ण उपकरण यसको विशिष्टताहरु मा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जहाँ हामी एक ठूलो कोटि हेर्न सक्दछौं। यी लेनोभो K5 नोटका पूर्ण विनिर्देशहरू हुन्:
स्क्रिन: HD + रिजोलुसन (१ resolution6० × p२० पिक्सेल) र १:: ratio अनुपातको साथ .1440..720 इन्च
प्रोसेसर: Qualcomm Snapdragon 450
राम: /२/3। जीबी
भण्डारण: /२ / GB 32 जीबी २ expand64 जीबी सम्मको माइक्रो एसडी कार्डको साथ विस्तारयोग्य।
रियर क्यामेरा: अपर्चरf/ 16 +f/2संग डबल १ + + २ MP
अगाडिको क्यामरा: अपर्चर एफ / २.२ संग १ MP सांसद
अपरेटिङ सिस्टम: Zen UI 8.1 अनुकूलन तहको रूपमा Android .3.9.१ Oreo, Android P मा अपग्रेड गर्न योग्य
ब्याट्री: 3.760 XNUMX०० एमएएच
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो अझ पूर्ण मोडल हो। अरु के छ त, यस लेनोभो K5 नोटमा हामी क्वालकॉम प्रोसेसर पाउँछौं, जुन निस्सन्देह ब्राण्डको पक्षमा एक स्पष्ट इशारा हो। तिनीहरूले उपकरण मा एक उच्च गुणवत्ता प्रोसेसर शर्त। यस सम्बन्धमा राम्रो विद्युत उत्पादनको अपेक्षा गरिन्छ, कम बिजुली खपतका साथै। राम्रो ब्याट्री हुनुको साथै यसले यस सन्दर्भमा धेरै आश्वासन पनि दिन्छ।
बाँकीको लागि, यसले हालको मध्य-दायरा भित्र राम्रो प्रदर्शन गर्छ। उपकरणको पछाडि हामी एउटा डबल क्यामेरा पाउँछौं, जुन पक्कै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा राम्रोसँग स्वागत गरिएको छ, र हामीसँग फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ। ब्रान्डले यी मोडेलहरूमा अनुहार पहिचानको लागि रोजेको छैन।
यो मोडेल अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा भर्खरको संस्करणको साथ आउँदछ, र यो यकिन गरिएको छ कि यो Android P मा अपडेट हुनेछ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई खरीद गर्नका लागि अझै एउटा कारण।
यस समयमा यो थाहा छ कि फोनहरू चीनमा सुरू हुन लागेको छ। यद्यपि यसको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणको बारेमा धेरै शंकाहरू छन्। यो धेरै सम्भावना छ कि तिनीहरू देश बाहिर सुरू गरिएको छैन, तर ब्रान्डले अहिले सम्म केहि भने छैन। त्यसैले हामी आउँदो हप्ताहरूमा यसको बारेमा अझ बढी सुन्ने आशा गर्दछौं।
हामीलाई पहिले नै थाहा छ यी दुई फोनहरू चीनमा हुने मूल्यहरू छन्। लेनोभो K5 नोट को मामला मा, त्यहाँ उपकरणको दुई संस्करणहरु छन्, यसको रैम र भण्डारणमा निर्भर रहन्छ। हामी तपाईंलाई तल सबै फोनहरूको मूल्यहरूको साथमा छोड्छौं:
लेनोभो K5 नोट 3/32 जीबी: 799 युआनको मूल्य (१० change यूरो परिवर्तन गर्नका लागि)
लेनोभो K5 नोट 4/64 जीबी: करीव १133 युरो परिवर्तन गर्न, 999 XNUMX yuan युआन चीनमा यसको प्रक्षेपणमा
लेनोभो A5 3/16 जीबी: 599 80 yuan युआन, जुन e० यूरो बदल्न सकिन्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » लेनोभो » लेनोभो A5 र लेनोवो K5 नोट: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
केहि भन्नु हुँदैन म स्तब्ध भए र अलमल्ल भएँ त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन यसले मलाई श doubt्का दिन्छ, कसरी मिर्चले ती मध्य-दूरीका स्मार्टफोनहरूको मूल्यवान छ?
शाओमीले MIUI १० जुन 10 मा सुरू गर्ने छ
अन्टु बेन्चमार्कका अनुसार मे २०१ 10 को १० सब भन्दा शक्तिशाली फोनहरू